Izimfihlo ezincane zokulala kahle usana
Kungani ezinye izingane zilala futhi zilele ngokuthula, kuyilapho abanye bevuka njalo, benqabile, baqhuma ephusheni? Kungakhathaliseki ukuthi kukhona yini i-pathologies enganeni yami? .. Imibuzo enjalo, eqinisekile, iyamangala ngabazali abaye baxhuma noma babhekene "nokuphulwa" okufanayo kwephupho elincane. Sizobhekana nokuphulwa okunye kwephupho lebhongo, hhayi elixhunywe nezifo.
Ngokuvamile ubunzima bokulala nokuphulwa kwezinsana zokulala zihambisana nokuziphatha okungalungile kwengane nabazali esikhathini esihambisana nokulala. Kulesi sihloko, sizobuka izimfihlo ezincane zobuthongo obuhle besana.
Ukulala okunamandla nokuphumula
Kungani izingane ngezinye izikhathi zilala ngokuthula, futhi ngezinye izikhathi ukulala kwazo kuphazamisa kakhulu? Kungani ezinye izingane zingalala ubusuku bonke ngaphandle kokuphazamisa abazali babo, kanti abanye, ngokuphambene nalokho, bavuke njalo amahora amabili?
Isizathu sokulala okungenakuphumula komntwana osanda kuzalwa ukungakwazi kwakhe izwe elikuzungezile. Izingane ezincane ngokuvamile "zidideka" imini nobusuku, zichitha "uhlobo lokuhlola" lwabazali babo amandla. Futhi emva kwezinyanga ezimbalwa kukhona umbuso wokulala nokungasetshenziselwa ukulala.
Isizathu sokulala okungenasiphelo kwengane ezinyangeni zokuqala zokuphila kungaba yi-colic yamathumbu, futhi ezinganeni ezindala isimo sokukhathazeka singabangelwa inqubo yokwenza izinto.
Kwenzeka ukuthi ingane ingalali ubusuku ebusuku ngenxa yobuhlobo obuseduze nonina noma ngenxa yokuthi okuthiwa, "inhlangano engafanele yokulala." Ngokuvamile ukulala okuhle kuvinjelwa ukucindezeleka ngokweqile ngokomzwelo phakathi nosuku. Futhi kuphela inhlangano efanele yombuso wosuku kanye "ne-association of sleep falling" izosiza ekuqedeni ukwephulwa kwezinsana zokulala, hhayi ezihlobene ne-pathology yesimiso sezinzwa.
"Lungisa" futhi "okungalungile" izinhlangano zokulala
Ngokwezibalo, emndenini ngamunye wesithupha ingane ingalali kahle (okungukuthi, ukulala okuphazamisayo okuqhubekayo ebusuku). Ngiyaqaphela ukuthi imbangela evame ukuhlukunyezwa kwezinsana zokulala yindlela engabonakali yokulala kwengane, okungukuthi: inhlangano engafanele yokulala.
Kufanele kube yizinsana zokulala ezifanele?
Usana kufanele lufunde ukulala lulodwa, ngokubambisana okungenani kwabantu abadala. Ebusuku, kuyadingeka ukunciphisa ukukhulumisana nengane ngesikhathi sezinkambiso ukuze ingane ihlukanise phakathi kwemikhawulo yokuziphatha emini nasebusuku. Lokhu kuziphatha kubaluleke kakhulu, ngoba ingane evukile kunzima kakhulu ukulala kunomuntu omdala. Ngakho-ke, sidinga ukusungula umbuso othize, ngenxa yokuthi ingane izobe isetshenziselwa ukulala ngemva komyalelo osungulwe: ukugeza, ukudla, ukuxhumana okungapheli nabantu abadala (indaba yokulala, i-lullaby).
Izinhlangano "ezingalungile" zokulala zihlanganisa: ukubetha ingane ezandleni zomuntu omdala, ukulala embhedeni womzali, ngesikhathi sokudla, ngomunwe emlonyeni, njll. Noma, ungaphikisana ngombhede wabazali. Manje kunezimpikiswano eziningi zokuvumela ukwabelana nokulala nengane. Into eyinhloko ukunquma kusengaphambili ukuthi yini ebaluleke kakhulu kuwe, futhi kusengaphambili ucabange ngokuthi uzohlukanisa kanjani umbhede ohlangene nengane.
Ingane endala (endaweni ethile ngemva kwezinyanga ezingu-8) ingahlakulela ubudlelwane "obulungile" bokulala "nomlamuleli". Itheyi ethandwa kakhulu yinkane ngokuvamile isebenza njengomlamuleli. Ngiyaqaphela ukuthi "umuntu ophakathi phakathi" angatholakala kubantwana abancane. Kungaba i-diaper noma ingubo yomama yokugqoka, i-rag igonywe ebisi, iphunga elilondoloza umama.
Kubalulekile ukwazi ukuthi ngenhlangano efanele yokulala nokuvuka, ukusetshenziswa kwemithi ngeke kudingekile. Futhi ngaphambi kokuthi "ukondla" umntwana ngamaconsi noma itiye, okushiwo udokotela, zama ukulungisa ukulala kwengane ngokuvumelana ngokwemvelo.
Uma ukuncelisa ukulala ubuthongo kusiza ukuthula komama wangaphakathi. Okusho ukuthi, uma umama ejabule - angalindeli ukuthula okuvela eceleni komntwana. Qala ngokwakho, kuqala!
Izimfihlo ezincane zokulala kahle
Ukuqhubekela phambili kulokhu okushiwo ngaphambili, masihlale phezu kwezimfihlo ezincane zokulala kahle kwezingane:
Thuthukisa amasiko akho kusihlwa. Ngisho noma ingane isencane kakhulu, isetshenziselwa "umbuso" wayo kusukela ezinsukwini zokuqala zokuphila kwakhe.
Ukubhekwa kufanele kube njalo indawo yokulala. Ngakho-ke, i-kid emini kufanele idlale kwezinye izindawo ukuze kusihlwa akuyona indawo "edidekile" yokulala nendawo yokudlala nokuvuka.
Zama, kusukela ezinyangeni ezinhlanu ubudala, ukubeka ingane ukulala ngesikhathi esifanayo.
Ngincoma ukuba ukondle ingane yakho ngaphambi kokulala ngesikhathi elele ngendwangu noma ngengubo, ngaleyo ndlela uyenze "isidleke", lapho ubeka khona imvuthu elele esitokisini.
Dala isilungiselelo sokulala: ukukhanya okungahleliwe, umculo othulile noma ngisho nokungabikho kwawo, ingxoxo enesizotha ingxoxo.
I-Lullaby nezinganekwane zebusuku
"Iphilisi elihle" lokulala usana luhlala lullaby. Lesi yisizathu esihle, ngoba izwi likamama liye lahlala lishaya. Futhi ungesabi ukucula ingane yakho ethandekayo i-lullaby, ngisho noma ungenayo idatha yezwi. Ngenxa ye-lullaby, umama unikeza ingane uthando, ukufudumala, ububele, ukuthula nokuthula. Futhi yini enye edingekayo ukuze ulale ubuthongo obuhle? Ukudala isiko esinjalo sokuxhumana nomntwana ngaphambi kokulala, wenza umkhathi oyimfihlo phakathi kwakho nengane, okuzogcinwa iminyaka eminingi. Hlabelelani izingane zakho ze-lullabies, zinikeze injabulo yokuxhumana nawe, futhi ukulala okuhle ku-crumb yakho kuqinisekisiwe, ngoba lizungezwe uthando lwakho nokufudumala kwakho!
Ukuthuthukiswa kwengane esanda kuzalwa, ukuzwa nokubona
Inyanga yeshumi nanye yokuphila kwengane
Ukunakekela ingane ekhaya ngemuva kwesibhedlela
Ama-acne ezinsaneni: ukwelashwa
Ukuhamba emthonjeni womntwana
Yini ukupheka ukudla
Abantu abazalwa ngonyaka wodaka
I-Horoscope ye-Taurus-abesifazane ngo-2016 - uthando nangonyaka wokuzalwa
Kungani amantombazane ejwayele ukuthanda amanga
Ukubeka i-gymnastics kwabesifazane abakhulelwe
Ungakuyeka kanjani ukucasula othandekayo
Izitshalo ezingaphandle: i-avocado
Ukupheka okusheshayo kwezitsha ezivela elayisi
Ukuya esikhathini esibuhlungu, indlela yokuphatha ngayo?
I-Hendel - ikhwalithi yaseJalimane yezimonyo zemvelo